kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto? | www.SomaliAction.tk
kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto?
Posted on August 28, 2008 by Ahmed Kadiye
Qofka waa in aan ku qiimeeynaa wanaagyada maldahan ee dabeecadda maxaa yeelay iyadaa ah midda sida saxda ah u go’aamineysa sida uu qofka isaga iskula macaamili doono, adiga uu kugula macaamili doono.. Sii Akhri
Qofka waa in aan ku qiimeeynaa wanaagyada maldahan ee dabeecadda maxaa yeelay iyadaa ah midda sida saxda ah u go’aamineysa sida uu qofka isaga iskula macaamili doono, adiga uu kugula macaamili doono, carruurtiinuna hadhow ula macaamili doono. Sidoo kale wanaagyada maldahan ee dabeecadda ayaa ah aasaaska xirriir kasta oo uu dadka wadaago, waxaana jira wanaagyo lagu qiimeeyo qofka aad nolosha la wadaageysid, kuwaasoo aan ku soo koobeyno shantan qodob:-
1. Daacadnnimo iyo run-sheegid: Waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee keena xirriir caafimaad qaba. Haddii aad ogaato qofka nolosha aad la wadaageysid in uu yahay runlow, taasi waxa ay ku siineysaa dareen weyn oo deganaan ah. Dhinaca kale hadddii aad ogaato in lamaanahaaga uu been kuu sheego waxaa ku soo wajahaysa nolol kacsan, shaki badan & carro badan, sababtoo ah haddii aan runta la isku sheegin kala shakin ayaa imaanaysa, taasoo carqalad ku keeni karta lamaanayaasha, isla markaana burburin karta kalsoonidoodii iyo is aamminaaddoodii.
2. Daareen deeqsinimo: Xirrirka ama lamaanennimada caafimaadka qabta kuma salyesna in la wadaago aqalka iyo sariirta ee waxay ku saleysan tahay in la wadaago dareennada, taas micnaheedu waxay tahay xabiibkaaga in aad u muujiso jacelka aad u qabto inta uu la egyahay, isla markaana aad u sheegto sida uu kuu qiimeeyo adi-ga. Waana in labada dhinacba had iyo jeer la isku muujiyaa dareen iyo is qiimeyn dhalanteed ka fog.
3. Dareen mas’uulnimo: Xabiibkaaga ama xabiibtaada waa in ay noqotaa qof u bisil in ay iyada is daryeesho adigana ku daryeesho. Mas’uulnnimadu waa in qofka uu ka fekaro nolosha iyo dareenka inta uu mas’uulka ka yahay
Waa Qoraa Sarree Cabdifitaax Cali Samatar Janatalman…
← Dafo xayawaan meel kasta jooga !!
Sawiro xayawaano oo aad u qurux badan →
3 thoughts on “kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto?”
August 29, 2008 at 13:49
sxb waan ku salaame waana arke sida wanaadsan aad noo soo gaarsiise qoraalka qururda bada aniga runtii waan ku qancey markii aan arkey
October 9, 2009 at 05:29
Sxb aad ayaa umahad’santahay axmed anigu waxaan dhihilahaa maseerka waa jaceyl xad’dhaaf’ah
qisdaan waan dawaday by af arabi thn